Weerarkii xabsiga Boosaaso oo Warbixin cusub laga soo saaray | KEYDMEDIA ONLINE
Weerarkii xabsiga Boosaaso oo Warbixin cusub laga soo saaray
Xafiiska Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa ka hadlay xog ku saabsan weerarkii kooxda Al-Shabaab ku qaadeen xabsiga weyn ee magaalada Boosaaso
BOOSAASO, Soomaaliya - Xafiiska Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa warbixin kasoo saaray weerarkii kooxda Al-Shabaab ku qaadeen bishii Maarso xabsiga magaalada Boosaaso ee gobolka Bari.
Kooxdii weerarka soo qaadday ayaa dishay qaar kamida ilaalada xabsiga oo uu ugu horreeyo taliyihii xabsiga, waxayna ka sii daayeen 337 maxaabiis oo 140 kamida maxaabiistaasina u xirnaayeen dambiyo la xiriira a argigixisnimo.
Waxaa lagu tilmaamay weerarradii ugu halista badanaa ee kooxda Al-Shabaab ku qaadeen meelaha ay ka dagaallamaan, wuxuuna u ekaa weerar qorsheysan oo si aada looga soo fakaray.
Xogtan ayaa waxay qeyb ka tahay warbixinta wakiilka gaarka ah ee ergayga Q.M. uqaabilsan Soomaaliya James Swan uu ka hor jeedinayo maanta shirka Golaha Ammaanka Q.M. uga furmaya waddanka Mareykanka.
Warbixinta ayaa sidoo kale qeyb ka ah weerarro ubadnaa qaraxyo oo ay geysteen kooxda Daacish gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan gobollada ay maamusho Puntland, halkaasoo u ah xarunta ugu weyn ee kooxda ISIS ka dagaallamaan.
Taliyihii hore ee DANAB Jeneraal C/raxmaan Cumar Jeeni-qaar ayaa sheegay in 7 bilood kahor uu ku wargeliyay laamaha amniga Puntland weerarkii habeen hore lagu qaaday saldhigga Boosaaso.